DHAGEYSO: Jubbaland oo war culus ka soo saartay xayiraada la saaray Kismaayo‚ ”DF dastuurka ayay ku tumatay‘‘! | HalQaran.com
DHAGEYSO: Jubbaland oo war culus ka soo saartay xayiraada la saaray Kismaayo‚ ”DF dastuurka ayay ku tumatay‘‘!
Kismaayo (Halqaran.com) – Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay si kulul uga hadashay xayiraadda dhinaca duulimadyada ah oo weli saaran Magaalada Kismaayo, waxaana saartay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Dastuurka Maamulka Jubbaland in xanibaada duulimaadyada Jubbaland la saaray ay tahay mid baalmarsan Dastuurka dalka, isla markaana saameyn weyn uu ku yeeshay Shacabka ku nool deegannada Jubbaland.
Wuxuu kaloo sheegay wasiirku, in qof walba oo Soomaali ah uu Dastuurka siinayo in uu tagi karo meesha uu doono, hayeeshee uu sheegay in aysan garan Karin dhibaatada intaasi la eg oo ay dowladda Federaalka u geysaneyso dadka Jubbaland.
Wasiirka Dastuurka ee Jubbaland, ayaa xusay, in dhibaatooyin dhinaca Caafimaadka ah in ay ka dhalatay xayiraada dhinaca duulimaadka ah ee lagu soo rogay Magaalada Kismaayo.
Halkan ka dhageyso Codka Wasiirka:
DF dastuurka ayay baalmartay
Jubbaland oo War cusub ka soo saartay Xayiraada Kismaayo